Lapho umuntu akakwazi ukuphefumula, imbangela kungase kube nezici eziningana. Ngaphambi kokucabangela izinhlobo kanye izimbangela ukuphefumula basebenzile, ake ukucacisa amagama. inqubo emishinini yokuphefumula kuhlanganisa esigabeni inspiratory futhi isigaba expiratory therebetween zikhawu ngobude.
Izimpawu, okuyinto esingasisiza ukuba sizibheke emndenini wakhe, futhi ikakhulukazi isaziso yabo udokotela angase angabi okulandelayo.
Izinga kancane. Kubhekwe ayegeleza kancane engaphansi kuka 12 nomoya ngomzuzu. Odokotela ushayele lolu hlobo ukuphefumula bradypnea. Lapho bradypnea izimbangela ukuphefumula basebenzile lihlotshaniswa kunomthelela oqonde ngqo isikhungo zokuphefumula, isib, igazi zanqwabelana imikhiqizo umzimba e yezifo ezithathelwanayo noma izidakamizwa nezidakamizwa kwezidakamizwa.
Ukwandiswa imijikelezo zokuphefumula - engaphezu kuka-20 ngomzuzu. Odokotela ushayele lolu hlobo ukwephulwa of tachypnea. Lolu hlobo libhekisela iziyaluyalu ezingavela ngenxa yokuthi umoya kuhlala futhi oxygenation yomzimba nzima. Izimbangela ukuphefumula basebenzile lapho tachypnea kukhona yangaphakathi futhi zibangelwa iziyaluyalu isimiso sezinzwa esiyinhloko. Kwesinye isikhathi iphika isici sesibili. Ngokwesibonelo, lapho embolism yamaphaphu, ozwa ubuhlungu obuhlabayo.
Hyperpnoea - esimweni umoya ngokujulile futhi quickened. It kuvela, udonsa kakhulu umoya futhi ngokuvamile, futhi, lokhu akunakunisiza umzimba wethu. Lokhu kuholela kahle izicubu umzimba, okuyinto ngokushesha kuthinta isimo jikelele zomzimba. Isizathu iyona excitation hyperpnoea emsipheni isikhungo (imizwelo isb eqinile, ukwesaba). Izifo yezitho zangaphakathi kanye izinhlelo futhi kungase kube imbangela yalesi sifo. Lezi zihlanganisa somoya, ukuntuleka kwegazi emzimbeni, kanye nemfiva.
Isimo lapho ukuphefumula izitobhi, odokotela ngokuthi zokuphelelwa umoya. Uhlobo oluvame kakhulu i - elele singathatha. Ebusuku stop ukuphefumula ingase ezihambisana iziyaluyalu ukuphathwa kwabathintwayo e isimiso sezinzwa esiyinhloko futhi isikhundla ungakhululekile zomzimba ngesikhathi sokulala. Ngokwesibonelo, elele singathatha ngokuvamile kwenzeka abantu abakhetha ukulala ezinkalweni zabo. Ngakho-ke, kwakunomfana ogamalakhe zonke ingalali eyaziwa Kunconywa ngohlangothi lwakho.
Uhlobo oluvame kakhulu izifo zokuphefumula - iphika, ngokuvumelana ngokwesayensi ngokuthi dyspnea. Ukuphelelwa ngumoya kuwo wonke waphawula ngaphezu kwesikhathi esisodwa. Izimpawu zokuqala zalesi simo itholakala lokuthi ukuthi isiguli akanawo umoya ngokwanele, kunzima ukuba sikwazi ukuphefumula, futhi ukukhuluma buthule. Njengoba sonke ukukhumbula, iphika thina kwenzeka ngemva kokuvivinya umzimba, okwehla esiphundu kakhulu, ngenxa yokuhluleka inhliziyo, isifo samaphaphu, nokunye. Lesi simo kuyinto ngakho ajwayelekile kithi ukuthi esikhathini esiningi sihlala ungacabangi, nokuthi ingabe uyafisa yini ukuthi aphathe? Futhi okubaluleke nakakhulu, indlela yokuphatha iphika? Indlela eyinhloko - iwukuba kahle ukuxilonga futhi ulungise isimo ukuthi sibangelwa yini. Kufanele uxhumane udokotela abanolwazi, udokotela izobamba wena ukuxilonga bese linqume ukwelashwa.
Uma othile phambi kwakho kwadingeka ngokuhlasela nokuvaleka kwemigudu yokuphefumula - obalulekile ukuba ulahleke. Sidinga ngokushesha ukuze abangele "fast", futhi ngaphambi kokufika kwakhe, ahlale noma ogulayo phansi kwekhanda lakhe ukuba wabeka isicamelo, ungakwazi ukuvula iwindi zizama ukuthulisa wakhe. udokotela kuphela kungacacisa ukuthi izimbangela ukuphefumula basebenzile, futhi enikeza izeluleko uchwepheshe.
Tracheal intubation: lapho kufika isikhathi sokuba a yesibili ...
Kanjani futhi yini ukugeza ekhaleni
Methanol: umphumela emzimbeni womuntu ngu ephefumula, usizo lokuqala
Lokho liphatha Proctologist? Yini ayenzayo?
Uyini kappa ukuze amazinyo mhlophe?